Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao baolina kitra frantsay Ny tantaram-pitiavan'i Hugo Lloris momba ny tantaram-pianakaviana malaza fa tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny fanakanana ny baolina kitra malaza amin'ny anarana; "Saint Lloris". Ny tantaran-tantaranay tantanin'i Hugo Lloris sy ny tantaran'ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia misy ny tantaram-piainany talohan'ny fahitana, ny fiainam-pianakaviana ary ny zava-misy tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny tanjony amin'ny fampitsaharana ny fahaiza-manao, saingy vitsy no mihevitra ny BioLogis Bio Bio izay mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Ny tantaram-pitiavan'i Hugo Lloris momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Voalohandohan'ny fiainana
I Hugo Lloris dia teraka tamin'ny andro 26F of December 1986 (ady androany) tao amin'ny tanàna somary manjavozavo sy malemy, ao amin'ny tanànan'i Nice, Frantsa, any Mediterane. Teraka tamin'ny reniny, Marie Lloris (mpisolovava) ary ray, Luc Lloris (banky iray). Tena manan-karena ny ray aman-dreniny.
Nantsoina izy taorian'ny nahaterahany "Hugo" satria ny ray aman-dreniny dia mpankasitraka lehibe ny mpanoratra Frantsay malaza Victor Hugo. Tonga avy any amin'ireo ray aman-dreny manan-karena i Hugo fa tsy nolazaina ho mpiambina fitifirana, fara fahakeliny tsy ny fianakaviany.
Nihalehibe i Hugo Lloris taorian'ny fanatanjahan-tena ankafizin'ny ray aman-dreniny, nilalao tennis izy, tahaka ny sisa tamin'ny fianakaviana dia niroso tamin'ny lalao ary nahataitra azy.
Nanao izany fanatanjahantena izany mandra-pahatongan'ny taonan'ny 13 izy ary anisan'ireo mpilalao ambony indrindra tao amin'ny sokajin-taona nisy azy, nifototra tamin'ny laharam-pahamehan'ny tanora Frantsay.
Ny tantaram-pitiavan'i Hugo Lloris momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Karohy amin'ny famintinana
Moa ve ny anjaranao, nosoratana tamin'ny kintana ... iza no afaka milaza? Nanomboka nilalao baolina kitra niaraka tamin'ny mpilalao baolina kitra i Hugo mba hahafaty ny fotoana mialoha ny lesona isan'andro amin'ny tennis. Tany am-boalohany, nanomboka tamin'ny maha-mpilalao baolina azy izy talohan'ny nanapahany ny toerana misy ny fiarandalamby mba hialana amin'ny mpiambina azy.
Somary nanahiran-tsaina an'i Hugo ny toerana misy ny baolina kitra izay olona niasa tao amin'ny klioba, nanontany ny rahalahiny, mpanazatra baolina kitra iray ao Cimiez ho avy ary hijery jiro tanora tsy fantatra sy omena azy.
Rehefa nangataka ilay antitra enin-taona mba hiditra ao amin'ny klioba ny CEDAC (Center de diffusion et d'action culturelle), dia faly i Hugo, saingy tsy nanaiky ny ray aman-dreniny. Taorian'ny fandresen-dahatra be dia nanaiky izy ireo. Tokony hanohy ny lesona amin'ny tennis ny zanak'izy ireo ary ho mpianatra tsara any an-tsekoly raha tsy izany dia tsy misy baolina kitra. I Hugo anefa indraindray dia lasa tia baolina kitra. Nanjary mafy toy ny ray aman-dreniny mihitsy aza izy. Soa ihany fa nanana namana iray tao amin'ny raiben-dreniny niteraka azy izy, mpankafy baolina kitra iray: izy io, izay naka ny zafikeliny tanora hatrany amin'ny làlan'i Nice mba hijery sy hampifaly ny ekipa ao an-toerana.
Fotoana iray izay nandalovan'ny fitiavany ny fitifirana lozisialy. Tamin'ny andro tsara sy mahatsikaiky, dia nanambara i Hugo fa tokony hitsidika azy ireo ny GK Dominique Baratelli, Former France sy Nice. Dominique Baratelli dia nahatsapa ny endrik'i Hugo tamin'ny fitsidihany. Taorian'ny nijereny azy nilalao tsotsotra dia nanosika ny bokotra ilaina izy ary nanolo-kevitra an'i Hugo hanatevin-daharana ny Akademian'ny Tanora OGC Nice. Tamin'ny folo taona i Lloris dia nanatevin-daharana ny academy youth of Nice.
Nandany taona 12 i Hugo tao amin'ny klioban'ny tanindrazany ary nampianatra sy baolina kitra; Tsy mora ilay izy satria tian'ny ray aman-dreniny hianatra any amin'ny sekoly mahazatra, fa tsy ao amin'ny Akademia izay nanolotra ora vitsivitsy hianarana. Raha ny marina, ny fanatanjahantena fotsiny dia ny fialamboly; fianarana sy ny oniversite, izay ho avy ho an'ny lahimatoa voalohany! I Hugo anefa dia te-hanatanteraka ny tanjony manokana. Nanao sonia ny fifanarahana matihanina voalohany izy taorian'ny nahazoany ny Baccalauréat (siansa sy matematika).
Tao amin'ny 2008, raha nilalao ho an'i Nizza izy dia maty ny reniny. Roa andro taorian'ny nahafatesany dia nahazo fanajàna nasionaly izy noho ny fandàvany ny tolo-kevitry ny traikefa amin'ny mpitantana Frédéric Antonetti, fa kosa nifidy ny hanao lalao fifaninanana ho an'i Nice. Lloris dia niavaka tamin'ny lalao na dia teo aza ny toe-javatra.
Taorian'ny vanim-potoana iray hafa niaraka tamin'i Nice, dia nipoitra ny tsikombakomba momba ny toerana handraisan'i Lloris ny vanim-potoana manaraka. Niaraka tamin'i Lyon izy tamin'io taona lasa io dia nodimandry ny mamanay. Taorian'ny fisehoan-javatra mampiady hevitra nifanaovan'i Lyon, Tottenham dia nanararaotra nanasonia azy tao amin'ny 2012. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Ny tantaram-pitiavan'i Hugo Lloris momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Relationship Life
I Hugo Lloris dia nahomby tamin'ny saha, nanambady ilay sambo mahafatifaty. Nihaona tamin'ny sekoly ambaratonga faharoa ireo mpivady, fony i Hugo no efa lasa mpanafika tany Frantsa.
Ny mpivady dia nivory tao amin'ny biraon'i Nice tao 2002 ary nanambady 10 taona maro taty aoriana. Nanam-bady tao Saint-Church de-Paule izy ireo tamin'ny lanonana kely tao Nice. Ny zanany vavy voalohany, Anna-Rose, dia teraka tsy ela taorian'izay. I Giuliana, zandriny indrindra, dia teraka tany 2014, fotoana fohy talohan'ny nanambaran'i Lloris an'i Frantsa tao amin'ny World Cup 2014.
Ireo zanakavavy roa ireo dia azo jerena matetika manohana an'i Hugo eo amin'ny seza. Niroborobo, vadin'i Hugo, i Marin dia tsy nikarakara loatra ny fanatanjahan-tena nataon'ny vadiny. Nolazainy fa ... " Amin'ny maha-zatovo azy, tsy liana amin'ny baolina kitra mihitsy izy. "
Amin'izao andro iainanao izao, dia afaka mahita an'i Marine eny an-tsisin-dalana na amin'ny White Hart Lane mandritra ny Ligy Premier na any amin'izay misy an'i Frantsa. Matetika izy no miaraka amin'ireo vehivavy hafa mpilalao frantsay, indrindra fa i Jennifer Giroud sy Ludivine Sagna.
Na dia manambady an'i Lloris hatramin'ny 2012 aza i Marine dia tsy mahazatra ny WAG. Manana mari-pahaizana momba ny lalàna sy ny maha-olona izy. Izy no tompon'ny Manège en Sucre, orinasa mpanamboatra akanjo izay mamokatra akanjo marevaka ho an'ny ankizy manomboka amin'ny telo volana ka hatramin'ny 12 taona.
Ny tantaram-pitiavan'i Hugo Lloris momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny soccer dia hita matetika amin'ny fanatanjahan-tena manjavozavo. Ny ankamaroan'ny mpilalao dia nizara tantara momba ny fanabeazana goavana ary manana ny lalao misaotra noho ny fitondrany harena be. Tsy izany no an'i Hugo Lloris. Izy dia zanaky ny fianakaviana bourgeoisie izay mihevitra ny vola avy amin'ny baolina toy ny voanjo. Lloris dia lehibe ny zanaky ny fianakaviana ambony tany Frantsa. Ny reniny taloha dia mpisolovava ary banky ny rainy. Samy manankarena be izy ireo.
rahalahiny avy; Gautier Lloris teraka 18 Jolay 1995 no zanakavavin'i Hugo Lloris. Mpilalao baolina matihanina frantsay iray izy izay nilalao ho an'i Gazélec Ajaccio avy any Nizza, toy ny ivon'ny ivon-toerana. Ity ambany ity ny sarin'i Gautier. Mitovy be toy ny an'i Hugo rahalahiny izy.
Ny tantaram-pitiavan'i Hugo Lloris momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana -Fiainana manokana
I Hugo Lloris dia manana ny toetrany amin'ny toetrany.
Hugo Lloris Tanjaka: Izy no tompon'andraikitra, voafehy, manana fifehezan-tena ary mpitarika tsara.
Hugo Lloris Fahalemena: Mety ho tsy mamela heloka izy, ary miala tsiny.
Inona no tian'i Hugo Lloris: Tiany ny Fianakaviana, ny fomba amam-panao, ny mozika ary ny fahaizana asa tanana.
Izay tsy tia an'i Hugo Lloris: Saika ny zavatra rehetra.
Ho famintinana, i Hugo dia fotoana sy andraikitra rehetra. Tena nentim-paharazana izy ary matetika tena matotra amin'ny natiora. Manana fanjakana mahaleotena izy izay nanome fandrosoana lehibe ho an'ny fiainany manokana sy matihanina. Tsy niahy ny harenan'ny ray aman-dreniny izy, fa nanohy ny hoaviny. Farany, Hugo dia tompon'ny fifehezan-tena ary manana fahaizana hitarika ny làlan'ny ekipany.
FACT CHECK: Misaotra noho ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Hugo Lloris momba ny tantaram-piainana malaza. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.